Voafidy ho eo am-baravarankely, ity herinaratra elektrika ity dia manome angovo maimaimpoana - Afrikhepri Fondation
Napetaka am-baravarankely ity herinaratra ity manome angovo maimaim-poana
Window Socket no ati-dohan'ireo Koreana Tatsimo roa, Boa Oh ary Kyuho Song. Ity foto-kevitra vaovao ity, izay mbola prototype ihany, dia mamela ity outlet elektrika ity hopetahana eo am-baravarankely na fanohanana hafa hamahana ireo olan'ny famerenana bateria. Ity dia outlet elektrika mitovy habe amin'ny paosy izay azo alaina amin'ny toerana rehetra handoavana ny fitaovana ankafizintsika isan'andro.
Mora ampiasaina ny Window Socket. Izy io dia fivarotana herinaratra finday miasa irery, satria mampiditra panneaux solaires kely izy io. Io zavatra io noho izany no ahafahana mameno indray ireo zavatra isan'andro mampiasa angovo azo avy amin'ny masoandro. Famoronana izay horesahina tsy ho ela.
Ity hevitra mamirapiratra ity dia mamela antsika handany herinaratra amin'ny fomba hafa.
Window Socket dia tena mitovy amin'ny panneaux photovoltaic izay fantatsika tsara. Ity orinasa ity dia ahafahana mampiasa sy misitraka maimaim-poana amin'ny herinaratra amin'ny alàlan'ny fametahana fotsiny ilay fitaovana eo am-baravarankely. Noho ireo sela miasa ao anatiny izay miorina ao ambadiky ny fitaovana, dia hisambotra ny angovo avy amin'ny herinaratra ny masonkarena mahaleo tena mba hanovana azy ho herinaratra, hamela ny zavatra rehetra hovidina.
Araka ny tombana nataon'izy ireo dia handray izany 5 ka hatramin'ny 8 ora ho an'ny bateria ao anaty fiampangana mandra-pahatongany mahatratra 1000 mAh. Eny tokoa, amin'izao fotoana izao, ny herin'ny Windows Socket dia mitovy aminy ihany bateria antsasaky ny AA. Na eo aza izany, mahaliana ilay noforonina ary azo atao ny manisy olana raha misy tsy fahampian'ny angovo.
Raha mino ny fanadihadiana sasany isika, ny habetsaky ny masoandro azontsika eto an-tany dia avo 3000 heny noho ny filantsika isan'andro. Misy ny safidy hafa amin'ny faritra rehetra, fotoana tokony hanampiana an'ity karazana tetikasa ity hahita ny hazavan'ny andro. Miakatra tsy tapaka isan-taona ny vidin'ny herinaratra, fotoana farany nitrangan'ity famoronana ity.
Anelka: Ilay tsy takatra - Documentary (2020)
Firenena iray izay manan-tsaina - Documentary (2020)
Kemtiyu Cheikh Anta - Rakitra fanadihadiana (2017)
Firenena tsy tia sy kolontsaina